आफ्नै राजनीतिक दल खोल्ने तयारीमा पूर्व डीआईजी रमेश खरेल - Himali Patrika
आफ्नै राजनीतिक दल खोल्ने तयारीमा पूर्व डीआईजी रमेश खरेल
हिमाली पत्रिका २५ असोज २०७८, 11:19 am
काठमाडौं । पूर्व डीआईजी रमेश खरेल राजनीतिक दल खोल्ने तयारीमा लागेका छन् । उनले खुला बहस गरेर जनताको अपेक्षा अनुसारको पार्टी खोल्न लागेको जानकारी दिए । “हामी कांग्रेस कम्युनिस्टबाट केही हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । पालैपालो लुट्नेबाहेक केही काम गर्दैनन् । यही कुरा देखेकाले साथीहरुसँग दल खोल्नका लागि छलफल गरिरहेको छु,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।
आइतबार दिउँसो २ बजे रत्नपार्कबाट पार्टी खोल्न लागिएको अपिल गर्ने उनको भनाइ छ । पार्टीको नाम नेपाल सुशासन पार्टी राख्ने उनले जानकारी दिए । “देश सुशासन नै नभएर बिग्रिएको हो । त्यसैले हामीले नेपाल सुशासन पार्टी बनाउने सोच बनाएका छौं,” उनले बताए ।
पूर्व डीआईजी खरेलले धर्मनिरपेक्षता, संसदीय प्रणालीका विषयमा पनि जनताको राय लिने बताए । दल खोल्ने सोच कसरी ? खरेलले नेपाल प्रहरीको आईजीपी नबन्ने भएपछि डीआईजीबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले अहिले दल खोल्ने तयारी गरेका हुन् ।
उनले दल खोल्ने प्रक्रियाबारे निर्वाचन आयोगमा पुगेर जानकारी लिइसकेका छन् ।२९ वर्ष प्रहरी सेवामा रहेर राजनीतिक दल खोल्ने सोच कसरी आयो ? “२९ वर्ष नेपाल प्रहरीमा रहेँ ।
उनी (नेता)हरुलाई भोगेको छु । उनीहरुसँग काम गरेको छु । उनीहरुको सोच, मनस्थती बुझेको छु । उनीहरुमा भ्रष्टाचारको लत कसरी बसेको छ भन्ने थाहा छ,” पूर्व डीआईजी खरेलले भने, “जेलमा बसेको पहिलो पुस्ताबाट पनि देशले केही पाएन ।
दोस्रो, तेस्रो पुस्ता क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुखको टेबल ठोकेका छन्, कालोमोसो दलेका छन् । टायार बाल्ने, रेलिङ भाँच्ने काम गरेका छन् । उनीहरुबाट के अपेक्षा गर्ने ? उनीहरुको ग्रुमिङ नै ठिक छैन । यिनै कुराहरु देखेर दल खोल्ने सोच आयो ।”